Tany Rwanda: nampahafantatra ny « Apaser » i Laza | NewsMada
Tany Rwanda: nampahafantatra ny « Apaser » i Laza
Nifarana, omaly tany Kigali Rwanda, ny atao hoe « Audiovisual forum », fotoana nampifandraisana ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny haino aman-jery manerana izao tontolo izao. Noresahina, nandritra izany koa ny fampivoarana, hahamatihanina ireo sokajin’asa ao anatin’izany sehatra izany, toy ny eo amin’ny famokarana sy fanatontosana sarimihetsika.
Anisan’ny niavaka tamin’ny fandaharam-potoana samihafa, ny famelabelarana nataon’i Laza, talen’ny Rencontres du film court (RFC). Izy mantsy no filohan’ny Apaser na ny Alliance panafricaine, miaro ny mpandrindra an-tsehatra sy ny mpanatontosa sarimihetsika. Herintaona izay no nijoroan’io rafitra iray io. Miara-miasa amin’ny fikambanana Writers & Directors Worldwide izy. Araka izany, andraikitra lehibe sahanin’ny Apaser amin’ny fitadiavana paikady hitakiana ny zon’ny mpanatontosa sy ny mpandritra an-tsehatra amin’ny sarimihetsika, aty amin’ny kaontinanta afrikanina.
Ankoatra ny mahakasika ny Apaser, nampahafantatra ny momba ny “Berlinale Africa Hub” ihany koa i Laza, tany Kigali. Hetsika fanao isan-taona izy ity ary hotanterahina ny 8 hatramin’ny 13 febroary 2019, any Alemaina, ny andiany manaraka. Ampahafantarina, mandritra io hetsika io kosa ny fivoaran’ny indostrian’ny sarimihetsika aty Afrika atsimon’i Sahara.
Tonga manatrika izany ireo mpandraharaha, izay vonona hihaona sy hifampiresaka amin’ireo mpanatontosa sarimihetsika sy mpamokatra. Fotoana ametrahana tambajotra amin’ireo sokajin’olona ireo io ary heverina fa hampiroborobo ny “films” afrikanina, indrindra, eo amin’ny fanaparitahana azy manerana izao tontolo izao.